Diyaarad Siday Khaad oo maanta ku dhacday Degmada Guriceel – SBC
Diyaarad Siday Khaad oo maanta ku dhacday Degmada Guriceel
Posted by Webmaster on Noofember 10, 2011 Comments
Garoonka Diyaaradaha degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxaa maanta ka dhacay Shil diyaaradeed oo ku yimid diyaarad nooca qaadka keena ah deegaanadaasi.
Shilkan diyaaradeed ayaa yimid xili ay diyaarada soo cagadhiganeysay Garoonka diyaaradaha Guriceel, waxaana ku yimid bur bur xoogleh iyadoona waday Khaad ama Jaad kaas oo lookala waday Magaalooyinka gobolka Sida Dhuusamareeb, Gaalkacyo, Cadaado iyo Deegaanada ku xeeran.
Ka dib markii uu dhacay shilka diyaaradeed waxaa saxaafada la hadlay Maamulada Garoonka diyaaradaha magaalada Guriceel Cali Yuusuf Axmed, waxaanu sheegay in khasaare ba’an uu soo gaaray diyaarada, islamarkaana ay wax ku noqdeen 4 qof oo saarnaa diyaarada Khaadka waday.
Waa markii ugu horeysay oo uu ka dhaco shil ceynkan oo kale ah garoonka diyaaradaha Magalada Guriceel, lamana garanayo ilaa iyo iminka waxyaabaha sababay shilkan diyaaradeed iyadoo ay xusid mudantahay in mudooyinkii ugu dambeeyay ay soconayeen dayactiro ay wadeen masuuliyiinta garoomaha Galgaduud.
Sikastoo ay ahaataba diyaaradaha sida Khaadka ayaa badi ka dega deegaano badan oo ka tirsan dalka iyadoona goobahaasi geeya khaadka .
SBC International Galgaduudac